Jiri matrage matrali iji mee ka azụmaahịa gị sie ike
Nke a bụ na ọkara afọ mbụ ahụ, ego a na-enweta ugbu a eritela uru na ebe dị mma ma na-achugharị ya site na otu ndị ahịa na-emeghachi omume pụrụ iche na nkwalite ahụ anyị na-ewu ewu. Ego anyị na-abụghị gap maka ịkekọrịta kachasị elu na-atụ anya oke ala dị ala karịa ọnụego ụtụ a tụrụ anya.
Ihe ohuru ohuru nke PGT gunyere CGI®, PG®®®ctors na windo windo nke Griverytern, Eze-Grizend CGIS. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ \_ 'na-ere ahịa na ahịa ya bụ nhọrọ mbụ maka ụkpụrụ ụlọ, ndị na-ewu ụlọ na ndị nwe obodo dị na North America na Caribbean. Ngwaahịa ha dị elu na omenala na oke nha, nwere nnukwu nha, na-enye ohere karịa
Ndị ọrụ lara ezumike nká na-eme njem ebe ngosi ihe mgbe ochie na Mezzanine nke etiti ma kerịta ahụmịhe mbụ nke ụgbọ okporo ígwè Hamilton. Ndị otu nkọwa ahụ na-eme ka owuwu na nrụzigharị ụlọ nke obodo a. Hamilton Guelọ Goym William ụlọ, 158 Mary Streetth atọ na-emegharị. Ahịhịa ụlọ na-eche ụlọ nwere ọmarịcha steepụ dị mma, nnukwu ụlọ na ọnụ ụzọ ihu na ụzọ mbata na Dr.